राज्यले नदेखेको बादीको कथा
राजेश घिमिरे, काठमाण्डौ, २०७० भाद्र ३१, सोमवार
फिल्म ‘मेरो कथा’मा कञ्चनपुरको बादी समुदायको कथालाई टपक्क टिपिएको छ । बाध्यात्मक यौन पेशा अंगालेका महिलाहरुको कथालाई उतारिएको यस फिल्ममा डीना बादीको चरित्रमा गंगा बस्यालको अभिनय रहेको छ ।
डेव्यु मात्रै हिट : फिल्म फ्ल्प कलाकार हिट !
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० भाद्र १६, आईतवार
इन्डियन आईडल प्रशान्त तामाङको डेव्यु फिल्म गोर्खा पल्टनको व्यापार सर्बाधिक रह्यो । नारायण रायमाझी निर्देशित फिल्म गोर्खा पल्टनले नेपाल प्रदर्शनबाट ३ करोड माथिको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो ।
फिल्मलाई समाजको हरेक वर्गले स्विकार्नु पर्छ : शिवम अधिकारी
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० भाद्र १०, सोमवार
फिल्म भित्र आफ्नै एउटा संसार हुन्छ । पात्रहरुको आफ्नो चरित्र हुन्छ । आफ्नै उद्धेश्य हुन्छ । पटकथा रुपी संविधानले फिल्मका पात्रहरुलाई फरक फरक भुमिकामा फरक फरक नियम लगाएको हुन्छ । त्यही नियम पालना गरेर पात्रहरु पटकथाको उद्धेश्यमा पुग्नु पर्छ । यसलाई निशर्त पालना गराउने जिम्मेवारी निर्देशकको हुन्छ । तर यति कडा निर्देशनको साथ बनाइएको पटकथाको हत्या किन हुन्छ ?
`सन्तुष्टि सबैभन्दा दुर्लभ प्राप्ती हो` : नीर शाह
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० श्रावण ११, शुक्रवार
मैले मेरो अभिनय यात्रालाई यही अध्ययनको पहिलो पाठशालाको रुपमा ग्रहण गरेको छु । यहि पाठशालाको रसायन कक्षमा म प्राक्टीकल गर्दै रहेछु- साठी वर्षको जीवनमा निरञ्तर ४४ वर्ष । प्राप्ती सन्तुष्टी हैन, तर सन्तुष्टी सबै भन्दा ठुलो प्राप्ती हो ।
स्क्रिप्ट पढ्दा मम्मीसँगै आँसु बग्यो : वेनिशा हमाल
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० श्रावण १०, बिहिवार
जुन उत्साहको साथ मैले स्क्रिप्टको पाना पल्टाएको थिएँ, त्यो उत्साह स्क्रिप्ट पढुञ्जेल पाएँ । पात्रको संवेदनामा मम्मी र मेरो दुवैको आँखा रसाए । स्क्रिप्ट चित्त बुझ्दो भएपछि मैले कल्याण सरलाई फोन मार्फत फिल्म खेल्न तयार छु भनिदिएँ ।
Results : 26 - 30 of 98